Ciidanka DFS oo cabsi aawgeed uga guuray saldhig muhiim ah oo ay kulahaayeen duleedka Muqdisho. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Wararka naga soo gaaraya Degmada Balcad ee Gobolka Shabeelaha dhexe ayaa sheegaya in Ciidamada dowladda Federaalka ah ka guureen saldhig ay ku lahaayeen inta u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar.
Ciidamada ayaa la xaqiijiyay in ay saaka faarujiyeen saldhiggii Tuulada Ceel Gooloow oo hoostaga Degaanka Qalimow ee Gobolka Shabeellaha dhexe.
Wararku waxaa ay sheegayaan in Ciidamada ay u soo roqaansadeen dinaca Magaalada Muqdisho mana cadda sababta ku kalliftay in ay banneeyaan saldhigoodii Ceel Geelow.
Dhaq dhaqaaqa Al-shabaab ayaa durba sheegtay in ay dib ula wareegeen Saldhigga markii ay isaga guureen Ciidamada dowladda.
Al-shabaab waxaa ay sheegeen in Ciidamada ka baxay Ceelgeelow qarax lagu beegsaday Gololey oo iyana ku dhow Degmada Balcad.
Guddoomiyaha Degmada Balcad Qaasin Furdo oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday kahadalka arrintan isaga oo naga codsaday in aan kala xiriirno cid kale oo ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha dhexe.
Previous articleDAAWO:- Puntland oo ka hadashay tirada iyo magacyada Maraakiib laga leeyahay dalal shisheeye oo si sharci darro ah uga kaluumeysa xeebaha Puntland.
Next articleDegdeg:- Doon kusoo wajahna Boosaaso oo ku rogmatay Badwaynta Hindiya.